Ukuxazulula izinkinga ezivamile zenkomfa yevidiyo |I-PUAS
Ukuxazulula izinkinga ezivamile zenkomfa yevidiyo
1. Iikhamera yenkomfaivuliwe futhi ayinaso isenzo noma isithombe.
Izinkinga ezinjalo ngokuvamile zibangelwa ukwehluleka kokunikezwa kwamandla, ukushintsha ukuhluleka kokunikezwa kwamandla, namapulaki ezintambo zikagesi axegayo, alula uma kuqhathaniswa.Umsebenzisi angakwazi ukuxazulula inkinga ngokuxazulula inkinga yokuhluleka kokunikezwa kwamandla nokuxhuma intambo yamandla.
2. Iikhamera yenkomfaayikwazi ukuzihlola noma ihambisane nomsindo ngesikhathi senqubo yesicelo.
Ngalolu hlobo lwenkinga, umsebenzisi angakwazi ukuhlola kuqala ukuthi intambo yamandla ikhululekile yini, ngoba intambo yamandla ekhululekile ingabangela kalula amandla anganele futhi ibangele inkinga ngokuqondile.Uma intambo yamandla ingaxegi, kungenzeka ukuthi iwukwehluleka komshini, futhi umsebenzisi udinga ukuthumela umkhiqizo ukuze ulungiswe.
3. Ezicelweni zangempela, iikhamera yenkomfaayilawulwa isilawuli kude.
Ngokuvamile, le nkinga ibangelwa ukuntuleka kwamandla ebhethri yesilawuli kude noma ibanga lokusebenzisa likude kakhulu, umsebenzisi angashintsha ibhethri yesilawuli kude futhi alungise ibanga lokuyisebenzisa ukuze ayixazulule.
4. Isithombe sekhamera siyalahleka uma i-pan/tilt yekhamera yenkomfa izungeza.
Ngokuvamile, le nkinga ibangelwa kakhulu ukunganeli kwamandla kagesi noma ukuthintana kabi kwekhebula levidiyo yekhamera.Abasebenzisi bangayixazulula ngokubheka ukuthi ipulaki yekhebula lamandla ikhululekile yini futhi bafake esikhundleni ikhebula levidiyo.
5. Ikhwalithi yesithombe sedivayisi eboniswayo exhunywe kusixhumi esibonakalayo sedijithali ayilungile njengeyokubonwa kwevidiyo ngokuqondile.
Ukuvela kwale nkinga kuhlobene nekhono lokutholwa kwesithombe kanye nokucubungula kwedivayisi lapho kutholakala ukuxhumana kwedijithali, futhi ikhwalithi yesithombe izolahleka nakanjani ngemva kokuguqulwa kwe-analog kuya kudijithali.
Isikhathi sokuthumela: Oct-20-2020
Uhlelo Lwefoni Yenkomfa Yomsindo E5 Iphrojekthi Yesistimu Yenkomfa Ngevidiyo ISkype Video Conferencing Ikhamera yePtz Usb Conference IPtz Conference Cam IConferencing System Price